ဘဝမှတ်တိုင်: ★★ဖုန်းအားလုံးကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ One Click SRS-Root Tool (7Mb)★★
★★ဖုန်းအားလုံးကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ One Click SRS-Root Tool (7Mb)★★
SRS-One Click Root Tool လေးကို Final Version လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Android versions 1.5 ကနေ 2.1, 2.2, 2.3,3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2 ထိ latest models များဖြစ်သော Samsung Galaxy S2 /S3, Note / Note2 အစရှိသည်ဖြင့် *Safe Rooting withoutflashing your device* ကောင်းမွန်စွာ
Root လုပ်နိုင်ကြောင်းကိုပြောထားပါတယ်။One Click Root လေးဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို
1- Phone or Tablet ကိုအရင်ဆံး Root မလုပ်ခင်အရေးကြီး Device တွေကို backup လုပ်ထားပါ။
2- ဆေ့ာစ်ဝဲကိုကွန်ပြူတာမှာ installation ပြီးတာနဲ့ မိမိရဲ့ Android phone or tablet ကိုကွန်ပြူတာနဲ့
USB cable ကို connect လုပ်လိုက်ပါ။
3- ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း “Root Device(All methods)” ဆိုတာကို Click လိုက်ပါ။ခဏတော့စောင့်ပါ။
ပြီးရင် Rooting complete ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Root လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ။
အကယ်၍သင့်အနေနဲ့ UnRoot လုပ်ချင်ရင်လည်း UnRoot Button ကိုနှိပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
SRS-Root is an easy to use
solution for rooting your
software contains multiple
exploits to gain root access
on your device. SRSRoot Supports Android
versions 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2 We can Root latest models
like Samsung Galaxy S2 /
S3, Note / Note2 etc We have an Option to remove
root from your device by
one-click. Powered by SRS Server
*Safe Rooting without
flashing your device*
1. Before you begin the
rooting process, make sure
you’ve backup your device.
2. After installation, connect the Android phone or table
you wish to root to your
computer via USB cable, and
then launch the SRSRoot
3. Finally, click on the “Root
Device(All methods)” and
Note that you can reverse
the rooting action by
clicking on the UnRoot
Button on the SRSRoot
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/21/2014 12:05:00 am